Ny rehetra dia miresaka momba ny "sakafo ara-pahasalamana". Ary inona no tokony holazaiko? Mazava ho azy fa tena zava-dehibe tokoa ny fihinanana sakafo mahasalama. Fa ny olon-dehibe dia tompon'andraikitra amin'ny raha tena mihinana sakafo ara-pahasalamana.
Hafa mihitsy ny fijeriny an'ireo zanatsika. Ny zanatsika dia tsy afaka misakafo ara-pahasalamana amin'ny andraikiny manokana. Mazava ho azy fa miresaka momba ny kely indrindra amin'ny malalantsika indrindra aho.
Izahay ray aman-dreny dia mazava fa takiana eto. Raha tsy ampianarintsika azy ireo hatramin'ny fahazazany ny karazan-tsakafo ara-pahasalamana efa voatahiry ho antsika olombelona, ​​iza no tokony hanao izany?
Ho an'ny ankizy kely, ohatra, tena zava-dehibe ny fananana kalsioma ampy foana hananganana taolana mahasalama. Mazava ho azy fa ny vokatra vita amin'ny ronono dia matetika eo an-tampony raha calcium no resahina. Na izany aza, misy ny ankizy (toa ahy taloha) izay tena tsy tia misotro ronono. Lafo ny torohevitra tsara avy eo.
Saingy tena misy be dia be ny fomba hafa ahafahana mamaly ny filanao kalsioma. Ny legioma maintso toy ny fennel, kale, leek ary broccoli dia mety ho safidy tsara eto. Ny kalsioma dia hita ihany koa amin'ny karazana voankazo sasany toy ny voaroy sy blackberry.
Tsia, aza manalavitra an'ireo vitamina ireo
Avy eo mazava ho azy fa misy ireo vitamina mahafinaritra izay resahina matetika hatrany. Ary tokoa, mila vitamina an-taonina ny dwarfantsika. Ho fanampin'ilay vitamina C manan-danja indrindra, ohatra hisorohana ny sery, dia ao anatin'izany koa ny vitamina A, B ary E. Manezioma sy zinc dia zava-dehibe ihany koa.
Mazava ho azy, ity lisitry ny sakafo tena ilaina ity dia mety hitohy mandritra ny fotoana tsy voafetra, fa ny fehiny dia mazava ho azy fa mamaky tsara.
Raha fintinina fohifohy izany dia faly foana ny ankizy momba ny lovia voankazo matsiro, izay manapaka kely indrindra. Ny hany mila ataon'izy ireo dia ny miditra amin'izy ireo ary mahazo vitamina lehibe manan-danja.
Amin'ny maha-ray aman-dreny antsika anefa dia tokony hasiantsika antoka koa fa misakafo tsara sy mahasalama ny ankizy any amin'ny faritra hafa. Ohatra, ny horonan-mofo vita amin'ny lafarinina fotsy dia azo antoka fa matsiro, saingy vitsy ny otrikaina ao aminy, izay midika fa tsy maharitra maharitra izy io. Ny vokatra vita amin'ny ravina, ny voam-bary manontolo na ny lafarinina tsipelina, raha tsy hilaza afa-tsy ohatra vitsivitsy dia ho tsara kokoa eto.
Ity fitsipika fehin-tànana manaraka ity dia mihatra eto: arakaraky ny maizina ny horonan-taratasy no mahasalama azy.
Raha ny fisotroana no tadiavin'ny ankizy zava-pisotro mamy. Mazava ho azy fa misy siramamy betsaka ireo, izay tsy vitan'ny hoe matavy fotsiny, fa ratsy be koa ho an'ny nifinao. Tea na voankazo no tena mety eto. Ny ankamaroan'ny ankizy dia mahita fa mankaleo ny rano. Ary mila miombon-kevitra amin'izy ireo mihitsy aza aho.
Ity misy toro-hevitra iray: fenoy rano ny siny iray, tetehina ny voankazo voajanahary, atsofohy ary avelao hihoatra ny alina. Ny ampitso dia misy rano misy tsirony voankazo. Tsy misy fruktose io rano io ary noho izany dia mamy mifanaraka amin'izany.
Manana fanontaniana, sosokevitra na fanakianana ve ianao?
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 21. Febroary 2021 21. Febroary 2021 Sokajy fahasalamana sy sakafo mahavelonaKeywords Essen, legioma, sakafo mahasalama, fahasalamana, voankazo, Misotro, VitamineLeave a Comment indray mandeha isaky ny kelikely: fihinanana sakafo mahasalama ho an'ny ankizy